Salaamanews » Mareykanka oo noqday hogaamiyaha la dagaallanka burcad badeedda Soomaalida
Home » Warar Mareykanka oo noqday hogaamiyaha la dagaallanka burcad badeedda Soomaalida Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 4th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay suuq xumida SoomaaliyaMidowga yurub oo sheegay inuu kordhay weerarka burcad badedda SoomaalidaMadaxweyne Faroole oo ka qeyb galay kulan Garoowe ay ku yeesheen baarlamaanka PuntlandDuufaantii ugu xooganeyd ayaa maanta gillinka dambe ku sii jeedda gobollo kamid ah SoomaaliyaCiraaq oo malaayiin doollar siineysa Soomaaliya
Mareykanka ayaa shir guddoomin doono sanadkan 2013 kulamada ay yeeshaan Kooxda Xiriirka ee ka dhanka ah burcad badeedda ka howlgashada xeebaha Soomaaliya iyo kuwa ka baxsan.
War murtiyeed shirka kooxda laga soo saaray ayaa lagu sheegay muhimadda ay leedahay in la sii xoojiyo dagaalanka looga soo horjeeda burcad badeedda kadib markii ay sanadkii hore hoos u dhaceen weerarrada iyo afduubka burcadda badda ay geystaan.
Kooxdu waxay sheegtay baahida loo qabo in iskaashi weyn ay ka yeeshaan arrimaha burcad badeedda dalalka, ururrada iyo qeybaha qaabilsan maxkamadeyntooda.
Warmurtiyeedka ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay hormariso istaraatiijiyadeeda amniga badda si ay u sahlanaanto wada-shaqeyn dhow oo ay beesha caalamka kala yeelato howlgalka ka dhanka ka dhanka ah burcad badeedda.
Mareykanka ayaa geystay kaalinta ugu weyn ee la dagaallanka shufta badeedda Soomaalida, waxaana xukuumadda Washington, ay malaayiin dollar ku bixisaa ciidamada ATLANTA ee jooga xeebaha Soomaaliya.
Tags: warar « Qoraalkii HorePuntland oo soo bandhigtay sir ku saabsan Al-shabaab kadib dagaal ka dhacay gobolka Bari	Qoraalka Xiga »Dawladda Soomaaliya oo doonaysa in ay dib u hanato hantidii dibadda	Halkan Hoose ku Jawaab